Efa nigadra kanefa tafavoaka indray… : tratra teo am-panomanana fanafihana i Cyril Be | NewsMada
Efa nigadra kanefa tafavoaka indray… : tratra teo am-panomanana fanafihana i Cyril Be
Par Taratra sur 26/12/2016
Voasokajy ho isan’ny jiolahy raindahiny ikoizana amin’ny fanafihana mitam-basy ao Toamasina ity Cyril Be ity. Tsy vao sambany no naiditra am-ponja, kanefa tafavoaka hatrany, ary izao saron’ny polisin’ny Fip izao indray.
Efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela noho ny fanafihana mitam-piadiana tao Toamasina i Marosaina Julio, 33 taona fantatra amin’ny anarana maha jiolahy azy hoe Cyril Be izay monina any Ambatoharanana Mananara Avaratra. Heloka anenjehana ity jiolahy ity ny fanafihana mitam-piadiana mahery vaika. Saron’ny polisin’ny Fip tao an-tranon’ny sakaizany ao Tanamakoa Toamasina izy raha iny teo am-panomanana fanafihana mitam-piadiana tao an-toerana. Araka ny fanazavan’ny polisy, maro ny fanafihana mitam-piadiana efa nandraisan’ity jiolahy ity anjara. Isan’izany, ny fandrobana ny vola mitentina 140 tapitrisa Ar niaraka tamin’ny firavaka volamena an’ny mpandraharaha iray ao Ampasimbe Manatsatrana ny volana septambra 2016 lasa teo. Teo koa ny fanafihana ilay teratany vahiny mpizahatany tao Mahambo, ny volana mey 2015 izay nahazoany vola mitentina 150 tapitrisa Ar ary 14 tapitrisa Ar teny amin’ny Cop Est Ankirihiry Toamasina ny volana febroary 2014. Efa voasambotry ny polisy tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina izy ny taon-dasa raha nikasa handositra haka sambo hihazo an’i Mananara Avaratra. Naiditra am-ponja vonjimaika tao Ambalatavoahangy izy taorian’ny famotorana sy ny fanolorana azy teny anivon’ny fampanoavana.
Karohina Ralava sy ny namany…
Nambaran’ity jiolahy ity nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa Jeannot monina ao Ampasibe no tompon’ny basy nampiasain’izy ireo nanafika ilay renim-pianakaviana mpandraharaha any an-toerana. Mbola misy basy hafa koa any amin-dRalava sy ny namany iray hafa. Voalaza fa mbola miriaria any izy ireo amin’izao fotoana izao. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa mpiray tsikombakomba amin’ity jiolahy raindahiny ity ireto namany ireto. Tsy mikely soroka araka izany ny polisin’ny Fip ao Toamasina amin’ny famongorana ireo jiolahy raindahiny mampitondra faisana an’i Toamasina. ”Tsy vitan’ny polisy irery anefa izany fa ilàna ny fifanomezan-tanana amin’ny fiarahamonina. Tsy maintsy ho tratra ireny jiolahy mbola miriaria any ireny ary fanamby hapetrako izany”, hoy ny kaomandin’ny polisin’ny Fip ao Toamasina, ny kaomisera Rafaliarivo Jules.
Hatreto tsy mety milamina mihitsy ny tanànan’i Toamasina na eo aza ny ezaka ataon’ny polisy amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana. Misy amin’ireny olon-dratsy ireny no voalaza fa misy olona miaro azy ka olana iray mampanano sarotra ny fanadihadiana ny raharaha toy izao.